4.8.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
4.8.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း
အဝေးမှသင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အသစ်ဖြစ်သည်. As we all adjust and adapt to our new way of “doing school”, your teachers and principals welcome your feedback about ways that we can support your child.
စောင့်ကြည့် ဒီဗီဒီယို of Superintendent Jonathan Cooper sharing ways families can access mental health support while buildings are closed.
As of today at 2pm, Mason City ကျောင်းများတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ, နှင့် 5,148 အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်အတည်ပြုဖြစ်ပွားမှု. အောက်ပါတို့မှာကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဘုံမေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။
During the weeks of April 13 and April 20, Mason ဆိုအထက်တန်းကျောင်း, Mason Middle School and Mason Intermediate School will have opportunities for families to retrieve items that have been left in lockers that are needed for remote learning experiences. In order to maintain social distancing requirements, families will be asked to remain in cars, and your child’s items will be placed in your vehicle’s trunk. MHS Principal Bobby Dodd, MMS Principal Lauren Gentene and MI Principal Eric Messer will share your school’s specific plans by Friday.
ပထမ, email [email protected] and we’ll try to fix it virtually.
Use ဒီပုံစံ to sign up to have the Comet Connector Bus come to your home and celebrate YOUR Comet!
#ချစ်သူ: ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့် hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်စဉ်းစားပါ ဒီစာရင်းမှာ။
Takeout Blitz ကိုစားရန်နှင့်စားသောက်ဆိုင်မည်မျှစားသောက်နိုင်သည်ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပြုလုပ်သည့်အရာများတွင်ပါ ၀ င်ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ယောရှုနေရာမှလှူဒါန်းပါ ရွေးချယ်ပါ “ ကြယ်တံခွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး” ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောမိသားစုကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအစားအစာဖြင့်သင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်ပါသည်.